LUNGISA IKHOWUDI YEMPOSISO YOGCINO LWEWINDOWS 0X803F8001 - ITHAMBILE
Lungisa iKhowudi yeMposiso yoGcino lweWindows 0x803F8001
Iposwe kwiIgqityelwe ukuvuselelwa: ngoFebruwari 17, 2021
Ngelixa ufaka uhlaziyo lweeApps kwiVenkile yeWindows ufumana impazamo ngequbuliso Zama oko kwakhona, Kukho into engalunganga, Ikhowudi yempazamo ngu-0x803F8001, ukuba uyayifuna ke ukwindawo elungileyo njengoko namhlanje siza kuxoxa ngendlela yokuyilungisa le nto. impazamo. Ngelixa ingezizo zonke ii-apps ezinengxaki, enye okanye ezimbini ziya kukubonisa lo myalezo wempazamo kwaye aziyi kuhlaziya.
Ngelixa ekuqaleni, inokubonakala ngathi ngumba we-malware kodwa akunjalo, kungenxa yokuba uMicrosoft akakakwazi ukuyilungisa inkqubo yokufumana uhlaziyo kwaye abasebenzisi abaninzi basafumana imiba eyahlukeneyo yokuhlaziya iiWindows okanye iiApps zabo Windows 10. Ngapha koko, makhe sibone ukuba ungayilungisa njani na iKhowudi yeMposo yeWindows 0x803F8001 kunye nesikhokelo sokulungisa ingxaki esidweliswe ngezantsi ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha.
Indlela yoku-1: Qinisekisa ukuba iWindows isexesheni
Indlela yesi-2: Bhalisa kwakhona i-Windows Store App
Indlela yesi-3: Seta kwakhona iCache yeVenkile yeWindows
Indlela yesi-4: Vumela ii-Apps zisebenzise indawo yakho
Indlela yesi-5: Sukukhangela iseva engummeli
Indlela yesi-7: Sebenzisa i-DISM Umyalelo
1. Cinezela Iqhosha leWindows + Mna ukuvula Useto emva koko ucofe ku Uhlaziyo & noKhuseleko.
2. Ukusuka kwicala lasekhohlo, ucofa imenyu Uhlaziyo lweWindows.
3. Ngoku nqakraza kwi Jonga uvuselelo iqhosha ukujonga naluphi na uhlaziyo olukhoyo.
4. Ukuba kukho uhlaziyo olusalindileyo, cofa apha Khuphela kwaye ufake uhlaziyo.
5. Nje ukuba uhlaziyo lukhutshelwe, lufakelele, kwaye iWindows yakho iya kuhlaziywa.
1. Kuhlobo lokukhangela lweWindows Iqokobhe lamandla emva koko cofa ekunene kwiWindows PowerShell kwaye ukhethe u-Run njengomlawuli.
2. Ngoku chwetheza oku kulandelayo kwi-Powershell kwaye ucofe u-enter:
3. Vumela le nkqubo ingentla igqibezele kwaye emva koko uqalise kwakhona iPC yakho.
Oku kufanele lungisa iKhowudi yemposiso yoGcino lweWindows 0x803F8001 kodwa ukuba usabambelele kwimpazamo enye, qhubeka nendlela elandelayo.
1. Cofa i-Windows Key + R uze uchwetheze wreset.exe kwaye ucofe u-Enter.
2. Vumela lo myalelo ungasentla usebenze oza kuphinda umisele ugcino lweWindows Store.
3. Xa oku kugqityiwe qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
1. Cofa iSitshixo seWindows + I ukuvula iiSetingi uze ucofe ku Ubumfihlo.
2. Ngoku, kwimenyu esekhohlo, khetha Indawo kwaye emva koko vula okanye uvule iNkonzo yeNdawo.
3. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho, kwaye oku kuya kwenza Lungisa iKhowudi yeMposiso yoGcino lweWindows 0x803F8001.
1. Cofa i-Windows Key + R uze uchwetheze inetcpl.cpl kwaye ucofe u-Enter ukuze uvule Iipropati ze-Intanethi.
2. Okulandelayo, Yiya ku Ithebhu yoqhagamshelo kwaye ukhethe useto lwe-LAN.
3. Sukukhangela Sebenzisa iSeva engummeli kwiLAN yakho kwaye uqinisekise Fumana useto ngokuzenzekelayo ijongiwe.
4. Cofa Kulungile emva koko Faka kwaye uqalise kwakhona iPC yakho.
1. Cofa i-Windows Key + X uze ukhethe I-Command Prompt (Admin).
2. Zama olu myalelo wolandelelwano lwesono:
Dism / Kwi-intanethi / Ukucoca-Umfanekiso / StartComponentCleanup
Dism / Kwi-intanethi / Ukucoca-Umfanekiso / RestoreHealth
3. Ukuba lo myalelo ungasentla awusebenzi zama oku kungezantsi:
Dism / Umfanekiso: C: offline / Coca-Umfanekiso / RestoreHealth / Umthombo: c: test intaba windows
Dism / Online / Coca-Umfanekiso / RestoreHealth / Umthombo: c: test entabeni windows / LimitAccess
Phawula: Faka endaweni yeC:RepairSourceWindows ngendawo yomthombo wakho wokulungisa (uFakelo lweWindows okanye iDiskhi yoBuyiselo).
4. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
Lungisa iKhowudi yemposiso yoHlaziyo yeWindows 0x80072efe
Lungisa iiSetingi zokuJonga isiqulathi seefayili ezingagciniyo kwiWindows 10
Ewe, Qhuba! Imposiso kuGoogle Chrome
Lungisa uBonisa uninzi lweeNkqubo eziSetyenzisiweyo useto lukhutshiwe ngaphakathi Windows 10
Yiloo nto onayo ngempumelelo Lungisa iKhowudi yeMposiso yoGcino lweWindows 0x803F8001 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sithuba ke zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.